Ukuzibandakanya nokuKhulisa iiNqwelo mafutha zeCRM Martech Zone
I-CRM yeNtlalontle yenye yala magama athanda ukusetyenziswa gingxi kwaye adideke. Kubonakala ngathi yonke inkampani enazo naziphi na izinto zentlalontle sele iqale ukwahlula usetyenziso lwazo kwindawo yeCRM yoLuntu. Ngokoluvo lwam, kukho izinto ezininzi ekufuneka zenziwe liqonga lasekuhlaleni ngaphambi kokuba lizibize njengeCRM yeNtlalontle:
esweni -Ukwazi ukubeka iliso kwezentlalo ngexesha-lokwenyani kunye nokuseta izilumkiso.
Uchonga -Isakhono sokufaka uchongo lweprofayile yezentlalo kunye nokuqokelela ulwazi kuyo yonke iprofayile yoluntu kunye nokuyisebenzisa kwirekhodi yomntu, ngokuhlelwa ukuba bayakhokela okanye ngaba ngabathengi.
Workflows -Ukwazi ukuhambisa unxibelelwano lwasentlalweni, ukwabela imisebenzi, kunye nokuqinisekisa ukuba izigqibo ziyasetyenziswa.
amaphulo -Isakhono sokuvelisa ngokukuko amaphulo okubandakanya ukuqhuba i-upsell kunye nokufunyanwa.
Ukubika -Isakhono sokwenza ingxelo ehlanganisiweyo kwiindlela zentlalo kunye neCRM ukuqinisekisa ukubuyela kutyalo-mali kuyafikelelwa.
I-Avectra yeNtlalontle yeCRM ibonakala ngathi inazo zonke izinto eziyimfuneko kwaye ipapashe le infographic kwi Zibandakanya njani iiNtlalontle zeCRM zeNtlalontle kunye nokuKhula.
tags: Nxaxhebaukukhulaizilumkiso zentlaloamaphulo entlalontlecrm yoluntuukuzibandakanya ekuhlaleniukukhula kwentlaloUkuchongwa kwentlaloingxelo yemidiya yoluntuukubeka iliso kwezentlaloUkunika ingxelo kwezentlaloUkuhamba kwentlalo
Uyakha njani iBrand yakho kwi-Intanethi
Umculo kunye neKamva eliShukumayo
Nov 30, 2012 ngo-1:17 AM
Ulwazi olukhulu uMnu Karr! Ndiyakholelwa ukuba i-crm yentlalo ingaba nefuthe elihle kwinkampani. Isithuba esihle!